Zviyeuchidzo zveane hutsinye: mufananidzo unotyisa wekutengesa kwevanhu | Zvazvino Zvinyorwa
Juan Ortiz | 01/09/2021 18:24 | Biography, Vanyori, Novela
Quote naBebi Fernández
Ndangariro dzehutsinye inoverengeka yakanyorwa nemunyori weValencian Bebi Fernández —M. Ndakanwa. Rakadhindwa munaNovember 2018, ndiko kutanga kwemunyori mumhando iyi, uye chinyorwa chinovhura bilogy yake Wemusango. Mutambo uyu unofukidza misoro yenyaya senge kutengeswa kwevakadzi nemhirizhonga pabonde. Fernández anoshandisa mutauro wakananga uye wakavhurika kuratidza hukasha hwenyika ino uye nemabatirwo avanoitwa rusununguko nekumanikidzwa kuita zviito zvine hutsinye.
Miss Bebi munhukadzi anoshandisa masocial network -Twitter ne Instagram- kushingairira kubatsira pachikonzero ichi. Kwaari, zvakakosha kuti azvidzidzise pamusoro pekuenzana kwevakadzi nevakadzi. Naizvozvo, anoti: “Tiri kunyatsochinja nzanga kuburikidza ne internet. Masocial network inguva yenjere yekudzidzisa injini yechizvarwa mushure meangu ".
1 Memoiridzo yechidimbu chinotyisa
1.1 Kuodza mwoyo kukuru
1.2 Nyika yakaoma
1.3 Ichokwadi chitsva
1.4 Chipfambi nekusabatwa zvakanaka kwevanhukadzi
2 Kuongorora kweMemoirs eSavage
2.1 Yekutanga data yenyaya
3 Nezve munyori, Bebi Fernández
Pfupiso ye Ndangariro dzehutsinye
Kuodza mwoyo kukuru
Muzhizha re96 - mushure memakore gumi nemashanu pamwechete-, Jacobo naAna vakanga vakamirira dangwe ravo. Akashuva chisikwa chakange chiripo murume, kuitira kuti mune ramangwana atore bhizinesi remhuri (kutengeswa kwezvinodhaka), basa risina kukodzera vakadzi. Zvisinei, Mushure mekuzvarwa, murume akanzwa kuti marongero ake ese akapunzika: akazova musikana.
Mwana aive akabhabhatidza Kassandra -K-. Her akakurira pakati peyakajairika mamosi nharaunda uko vakadzi vanongotarisira pamba. Musikana tsvarakadenga- aine hunhu hwakaomarara uye kugutsikana kwakajeka- akarerwa kwakasvibira uko baba vake vakakonzera kusuwa kudarika mufaro.
K paakasvitsa makore 19, Jacobo akaurayiwa. Chiitiko icho chingareve kubuda kubva munyika inotyisa kumukadzi mudiki, chakakonzera mamiriro akashata chose.
Memoir dzeanotyisa: ...
Mukuru webasa akabviswa neimwe yemafia ayo aiita bhizinesi nawo, zvese izvi nekuda kwekuunganidzwa kwakakura kwezvikwereti. Zvisinei nekufungidzira kuti "zvipikirwa" zvakagadziriswa mushure mekufa kwaJacobo, Emil, mutungamiri weboka rematsotsi, akarayira kuti K naamai vake vabhadhare mari.
Ose ari maviri, asina kana sendi, akaendesa kumirairo yemutadzi kuchengetedza hupenyu hwavo. Pamusana, K aifanira kushanda saanogamuchira mune imwe yeaya brothels, kudzamara maakaundi ake agadziriswa.
Chipfambi nekusabatwa zvakanaka kwevanhukadzi
Muden iri, K akaona chokwadi chinotyisa uye chakaomarara: gumi nemaviri evakadzi vanobatwa sevaranda ... vanorohwa uye vanonyadziswa mazuva ese. Ivo ndevokune dzimwe nyika avo vakanyengedzwa nemafungiro e "ramangwana rakanaka semamodeli." Vakabiwa, vakabviswa kubva pese pavanosangana nevavanoda uye kumanikidzwa kuita chipfambi kubhadhara "chikwereti" yerwendo rwakavatendera kuti vasvike "kunyika yechipikirwa."
Zuva nezuva, Emil nevarume vake - "echando varume" - vakaramba vakadzi vese vachinyadziswa. Nekudaro, hapana akarasa tariro. K akaramba kukurirwa neMafiasaka akafunga kunyoresa mumakirasi ekuzvidzivirira. Zvakanga zvakaita seizvi akauya kunzvimbo yekurovedza muviri yaRam, anokwezva mudiki krav magá nyanzvi, uyo akamuraira mune izvi zvehondo.
Pakati paK naRam paive nekubatana nekukasira, zvisinei, akaramba kudanana. Musikana uyu akatanga kusimukira kune varume zvekuti zvakamuomera kuvimba mumwe. Kune chikamu chayo, Ram aive asina hupenyu hwakareruka futi, uye anoziva maitiro ekuziva kushungurudzwa, saka chenjera kana uchisvika kwaari. Yakati nexus yakasimbisa iyo yemamiriro ezvinhu Kubva pane imwe nhevedzano yezviitiko zvakaoma uye zvisingatarisirwi zvinoitika zvinotungamira kumhedzisiro.
Analysis of Ndangariro dzehutsinye
Yekutanga data yenyaya
Ndangariro dzehutsinye ine huwandu hwe Mapeji 448, yakakamurwa kuva 14 zvitsauko ine zvemukati zvirimo. Zviri yakataurwa mumunhu wechitatu; Fernández anoshandisa mutauro wakajeka uye wakasimba. Iyo zano inowonekera mune a mutserendende mutinhimira uri kuwedzera kusvikira dheini yaro.
Iye akanaka musikana wechidiki, ane chena ganda uye maziso egirini anopenya nerunako rwake. Akakurira munzvimbo inotyisa, akapoteredzwa nezviito zvisiri pamutemo nevarume vane hutsinye vakamukuvadza zvakanyanya kubva achiri mudiki. Zvisinei, ine simba rakakura; Mweya wake wekusaziva wakamutendera kusangana nehushingi hupenyu hwakamubata mushure mekufa kwababa vake. Haazofi akazorora kudzamara ruramisiro yaitirwa iye nevamwe vasara veavo vaibatwa Ice Ice.
Iye mudiki musanganiswa muridzi muridzi wetsiva jimu. Akave achiita krav magá kwemakore. Kunyangwe kuve mudzidzisi, inochengetera nzira dzine njodzi uye dzinouraya. Paakasangana naK, anorohwa nerunako rwake, asi panguva imwechete anonetseka nezve hupenyu hwake mushure mekucherechedza akateedzana emavanga paganda rake. Asingazvizive, iko kungoenderana naye kunoisa hupenyu hwake munjodzi zvakare.
Munyori yakakwanisa kutsanangura zvakadzama kudaro mavara, kuti mumwe nemumwe wavo ane huremu hwakaenzana, hapana "mafiller". Fernández akasimbisa zvakanyanya nyaya dzevakadzi vechipfambi. Pakati pavo pane: Katia, Bruna, Marcela, Maisha, Polina naAleksandra; vese vasikana vadiki vekunze, vanotaura hupenyu hwavo mune yese nyaya.
Bebi Fernández anokwidza izwi rake uye anoisa muenzaniso unoshamisa pamusoro pekutengeswa kwevanhu uye ukuru hwekushungurudzwa pabonde kwavanotambura. Kunyangwe iri nyaya yekufungidzira, inoratidza chokwadi chakashata chekuti vakadzi vazhinji vanogara muSpain. Kune munyori, nzanga inofuratira iyi mamiriro; Panyaya iyi, anoramba achiti: "Ini ndaida kupa izwi kudambudziko iri nekuti kunyarara kuri pariri kunoratidzika kunge kune hutsinye kwandiri."
Mune rake basa semutsotsi, munyori aona mhedzisiro yakaipa yehuranda hwepabonde. Kwaive kuramba kwake hutsinye uhu kwakamutungamira kuti atore zvese mumabasa ake maviri ezvinyorwa. Nezve zvaakasangana nazvo nemhando dzematsotsi aya, akati: “Ndinoziva mashandiro avanoita uye hapana mutemo kana chirambidzo chichavaregera. "Zvinoita chete kuti vashaye vashandisi."
Iye anotora kuti dzidzo yakakosha kupedza aya mafias uye masisitimu ematsotsi. Nezve izvi, akataura: "Dzidzo mune hunhu, kungwara kwepamoyo uye tsitsi, ndizvo kwete mbiru yekutanga, asi iyo hwaro hwaro panogadzirirwa mhinduro dambudziko renguva refu remhirizhonga kuvanhukadzi ”.
Nezve munyori, Bebi Fernández
Bebi Fernández, anozivikanwa nezita remanyepo Srta. Bebi, akaberekerwa muValencia muna 1992. Iye murwiri wemukadzi, ane mukurumbira mukuru pasocial network. Nevanopfuura mamirioni nehafu vateveri, ndeimwe yeanonyanya kuzivikanwa kukurudzira kwevakadzi muSpain.
Semunyori, akatanga mune yekunyora nyika aine mabhuku mudetembo prose: Kuda nekusemesa (2016) uye Hazvigoneki (2017), ese ari madhiri aakaita muhudiki hwake. Kutanga kwake kukuru semunyori wenhau kwakagadzirwa mu2018 nenyaya yemukadzi Ndangariro dzehutsinye. Makore maviri gare gare, mushure mekubudirira kwerino bhuku rekutanga, ini ndinoenderera nemusoro wenyaya mumwechete ndikapa: mambokadzi (2021).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Ndangariro dzehutsinye